हिन्दु धर्ममा किन यति धेरै मानव अनुहारका भगवानहरू ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार हिन्दु धर्ममा किन यति धेरै मानव अनुहारका भगवानहरू ?
वैदिक धर्म या सनातन धर्म आदिकालदेखि चलीआएको धर्म हो । जसलाई ठ्याक्कै हिन्दु धर्म भन्न मिल्दैन् । ‘सनातन धर्मलाई हिन्दु धर्मका रुपमा बुझ्नु सिमीत ज्ञान मात्र हो । ‘ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । यद्द्पी चलनचल्तीमा वैदीक/सनातन धर्म नै हिन्दु धर्म हो भनेर मानिदै आइएको छ ।
तर यथार्थमा हिन्दु भनेको कुनै एउटा धर्म या संस्कारमात्र नभईकन धेरै संस्कार, दर्शन अनि सभ्यताको मिश्रण भन्ने हो । भौगोलिक रुपमा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिएको यो शव्दभित्र मुसलमान, बौद्ध, जैन लगायतका धेरै धर्म या परम्परा पनि अटाँउदछ ।
यस कुरालाई अहिले यहिँ छोडौं ।
प्रथमत: ‘धर्म के हो ?’ त्यसतर्फ जाऔं:
धर्म त्यस समयको सामाजिक व्यवस्था, नीति, संस्कार मात्रै नभएर त्यस समय बुझाउने एक घटक हो । धर्म एक कालखण्डको जीवन पद्धति हो भने त्यसका राम्रा पक्षहरूको उजागर गर्दै लैजानु हाम्रो दायित्व हो भन्न करै लाग्छ ।
यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि धर्म केलाई भन्ने ? सामान्यतया धर्म भनेको कुनै पनि वस्तुको कहिल्यै नफेरिने विशेषता हो । कुनै पनि वस्तुको नितान्त आफ्नो स्वभाव नै त्यस वस्तुको धर्म हो । जस्तै: आगोको धर्म तातो हुनु हो । पृथ्वीको धर्म गन्ध आउनु हो । बीउको धर्म उम्रिनु अनि हावाको धर्म बहनु हो । उसैगरी हामी मनिसको धर्म हो- मानवता।
मानवको धर्म अर्थात् मानवता भनेको उसको आफ्नो पहिचान, अस्तित्व साथै स्वाभिमान हुन् आउँछ । तर आफ्नो धर्म निभाउने भन्दैमा कुनै पनि वस्तु, जनवार, पंक्षी या किटपतंगको पहिचान, अस्तित्व र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउनु मानव धर्म भित्र पर्दैन ।
धैर्य रहनु, सहनशील हुनु, आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नु, चोरी नगर्नु, शुद्ध पवित्र रहनु, इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु, बुद्धि विवेकको उपयोग गर्नु, ज्ञानी हुनु, सत्य बोल्नु, नरिसाउनु, कसैको हिंसा नगर्नु, सात्विक आहारविहार गर्नु यी र यस्ता सद्गुणहरू नै मानवधर्म हुन् ।
अब प्रसंग जोडौं- हिन्दु धर्म र यससँग जोडिन आइपुग्ने केहि प्रश्नहरूको:
हिन्दु धर्म- जहाँ असंख्य मात्रामा जनावार, पंक्षी एवम् बोटबिरुवा साथसाथै मानव अनुहारधारी असंख्य व्यक्तिहरूलाई भगवान मानि पुजाआराधना गरिदै आइएको छ । आखिर यस्तो किन छ कि यस धर्मलाई मान्ने मानिसहरु यति धेरै देवीदेवताहरूलाई मान्छन् ? उनीहरुको पूजा गर्दछन् ? अन्य धर्ममा त एकमात्र भगवान हुन्छ। हिन्दू धर्ममा कैयौं भगवान किन बनाइयो ? यसको कारण के हो ? अनि भगवानहरू मानव अनुहारधारी नै किन हुने गर्छन् ?
सनातन वैदिक संस्कृति:
सनातन वैदिक संस्कृति नै एक मात्र संसारको सबैभन्दा प्राचीन संस्कृति हो। जसलाई आज हिन्दू धर्म समेत भन्ने गरिएको छ । हिन्दू संस्कृति एक मात्र सनातन संस्कृति हो- जुन रिलिजन होइन यो त एक जीवन जिउने कला मात्रै हो । यसमा हामी जन्मदेखि लिएर मृत्यु र त्यो भन्दा पनि माथि मृत्यु पश्चातको १६ संस्कार इत्यादि सम्म पनि हिन्दू धर्मले नै गर्नुपर्ने कामहरु निर्देशित गरेको छ।
आजको नयाँ धर्महरु कुनै पनि व्यक्ति विशेषको नामबाट चलेको पाइन्छ भने ती व्यक्तिहरुको आदि र अन्त समेत छ। तर, सनातन संस्कृति र हिन्दू धर्मको न कुनै सुरुवातको मिति छ, न त अन्तको मिति तय गर्न सकिन्छ। किनकी यो सीधा ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको स्थिति र शिवको संहारद्वारा चलिआएको छ।
सनातन संस्कृतिमा समेत भगवान एक छन् र उनले अनेक रूप लिएका छन्, जुन भगवान हुन् भनिएको छ। बाँकी सबै देवी देवता हुन्। जो सृष्टिको कार्यमा सहायक छन्। भगवान अजन्मा, अविनाशी र अनन्त छन्। यिनको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। जबकि सारा देवी देवताको एक दिन अन्त हुन्छ।
परम पुरुष स्वयं भगवान हुन् ।
अत: यहाँसमेत एकमात्र परम पुरुष स्वयं भगवान हुन्। देवी देवता अनेक छन्। दोस्रो तर्फ हिन्दू धर्म यति धेरै व्यापक र अनन्त छ। कुनै मानिसले करोडौं जन्म लिएपनि यसको अन्तबारे पत्ता लगाउन सक्दैन। यदि कोही श्री राम/ श्री कृष्ण या भगवान् विष्णुको भक्ति सच्चा ह्रदयद्वारा गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले सबै कुरा जान्दछ।
हिन्दु धर्ममा जस्तै ग्रिक मिथोलोजीहरूमा पनि अनेकौं भगवानका वर्णन पाइन्छ । उनीहरू समेत भगवानलाई असल गुण एवम् मानव अनुहार भएका व्यक्तिहरू हुन् भनेर मान्ने गर्दछन् ।
खासमा हामीले धर्म भनेर बुझिरहेका हिन्दु, ईशाई, बौद्ध, इस्लाम यी सबै भिन्न भूगोल, रहनसहन र हावापानी अनुकुल जीवन दर्शन र पद्धती हुन् । अत : हाम्रो भूगोल र हावापानीमा कुन पद्धती सही हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल हामी आफैले गर्ने हो । र, सोहिअनुसार नै आफ्नो व्यवहार, स्वभाव, र आनाबानीमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउनु नै हरेकको मानवधर्म हो । यसरी हामी सबै एक असल व्यक्ति बन्न सक्छौं । सामन्यतया असल गुण भगवानकै गुण हो । यसमानेमा हामी सबैको अनुहार भगवानसँग मिल्छ भन्नुस या भगवानको अनुहार हामी सबैसँग मिल्छ भन्नुहोस्- कुरो एकै हुन् आउँछ ।
२१ मंसिर २०७६, शनिबार १५:०६